बिहानैको घुमाईमा खाली खुट्टा हरियो घाँसमा हिड्नुको यस्तो छ फाइदा !पढ्नुहोस पुरा.... - Everest Media News
Home रोचक खबर बिहानैको घुमाईमा खाली खुट्टा हरियो घाँसमा हिड्नुको यस्तो छ फाइदा !पढ्नुहोस पुरा….
In: रोचक खबर, स्वास्थ्य
बिहानको हिडाइ शरीरको लागि निकै फाइदा जनक छ । यदी बिहानैको घुमाईमा खाली खुट्टा हरियो घाँसमा हिड्नु त्यो भन्दा पनि बढी फाइदाको कुरा हो । नांगो खुट्टा घाँसमा हिड्नुको यस्तो छ फाइदा !
तनाव कम हुन्छ:तपाई जति बढी समय हरियालीको विचमा रहनुहुन्छ उतिनै स्वस्थ र तनाव रहित रहनुहुनेछ । घाँसमा नांगो खुट्टा हिड्दा विस्तारै मांशपेशीमा सुधार आउँछ । साथै ग्रीन थेरापीबाट मष्तिस्कको शक्ति बढ्छ।मधुमेहमा सुधार:मधुमेहको रोगीले हरियो घाँसमा बस्नु र हिड्नु फाइदाजनक कुरा हो । यदि मधुमेह रोगीले दैनिक हरियो घाँसको विचमा बसेर लामो स्वास फेर्छ भने शरीरमा अक्सिजन पुर्ति भएर समस्या समाधान हुन्छ।
एलर्जीको उपचार:ग्रीन थेरापीको मुख्य हिस्सा हरियो घाँसमा नांगो खुट्टाले हिडुन् हो । विहान बिहान ओसले भिजेको हरियो घाँसमा हिड्दा खुट्टाको मुनिको कोशिकाबाट मष्तिस्कसम्म राहत पुर्याउँछ । यसले एलर्जी कम गर्छ।आँखामा चमक:विहान विहान ओसमा भिजेको घाँसमा हिड्दा आँखाको ज्योति बढ्छ । केही दिन नांगो खुट्टाले हरियो घाँसमा हिड्दा तपाईले आफुले लगाइरहेको चस्मा उतार्न पर्नेछ वा चस्माको पावर कम गर्नु पर्नेछ ।
‘मेरी मामु’को कन्सर्टमा यस्तो क्रेज आयुबको आगन हुँदा सिट्टी र तालीले प्रशँसा………
“समाजमा नराम्रो सन्देश दिने रोल गर्दिन” :- प्रदिप खड्का भन्छन………